Perikopa (Mg)| Page 7
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XII manaraka ny Trinite 09-14 Septambra 2019 ”Andriamanitra mampifaly ny olona”
8 septembre 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: Ny fikendren’Andriamanitra hatramin’ny naharian’izao zavatra ary rehetra izao dia ny hampifaly ny olona. Ho amin’izany, dia naneho ny hatsaran’ny asan’ny tanany Izy araka ny voasoratra hoe: ”Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31. Izany koa no noventesin’ny mpanao Salamo manao hoe: “Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XI manaraka ny Trinite 02-07 Septambra 2019 ”Andriamanitra manamarina ny olona”
2 septembre 2019 by mpiandraikitra	1 Comment
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manamarina ny olona ka tsy tiany hangaihay na ho very izy, satria mpanota tsy marina. Satria ny tsy marina dia tsy manana anjara amin’ny fanjakan’ny lanitra, ka tsy afaka hiditra ao aminy na handova izany (Apok.22:15). Ny atao hoe ”tsy marina” dia izay rehetra tsy manoa ny sitrapon’Andriamanitra, fa manao izay mifanohitra amin’izany, … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VIII manaraka ny Trinite 12-17 Aogositra 2019 “Andriamanitra momba ny olony”
12 août 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra momba ny olony” dia manambara fa tia ny Azy indrindra Izy, ka tsy mahafoy azy na mamela azy ho irery, indrindra amin’ny fotoan-tsarotra mety ho diaviny, toy ny ady, aretina, fahasahiranana ara-piainana, loza sy fahafatesana rahateo. Momba ny olony tokoa Andriamanitra, koa na inona na inona zava-manjo azy, dia tsy miova … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VI manaraka ny Trinite 29 Jolay – 03 Aogositra 2019 “Tandremo ny didin’Andriamanitra”
29 juillet 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra no mampiseho ny fitiavana an’Andriamanitra. Izany dia araka ny tenin’i’ Jesosy manao hoe: ”Raha tia Ahy hianareo dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Ho an’izay tia an’Andriamanitra, dia fifaliany indrindra, fa tsy zioga tsy ataony ho tsy antonona azy, ny mitandrina ny didin’Andriamanitra. Hoy Jaona Apostoly manantitra izany manao hoe: ”Fa … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Trinite 22-27 Jolay 2019 “Tompo Andriamanitra” *
23 juillet 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: Ny foto-kevibe fonosin’ny lohateny eto manao hoe ”Tompo Andriamanitra” dia midika avy hatrany hoe: ”Fantaro sy ekeo ny maha- Tompo an’Andriamanitra” eny, ”ny maha-TompoTokana Azy”. Fa voalazan’ny didy voalohany ao amin’ny Didy Folo izay nomen’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Mosesy hoe: ”Aza manana Andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3. Ary amin’izany dia manantena indrindra ny Tompo fa … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Trinite 15-20 Jolay 2019 “Ny fankasitrahan’Andriamanitra”
15 juillet 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe amin’ny olombelona ny mahazo ny ”fankasitrahan’Andriamanitra”. Ny hevitr’izany dia fanamarinana azy, ny famaliana soa ny asa tsara nataony, toy ny nitenenan’ity tompo ny mpanompony manao hoe: ”Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky* tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21. Mifanjohy amin’izany ny fanambarana nataon’i … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Trinite 08-13 Jolay 2019 “Andriamanitra mamindra fo”
Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra mamindra fo” dia manambara ny fitiavany indrindra ny olombelona mpanota ka anaovany izay azony rehetra atao mba tsy hahavery azy, fa hahavonjy azy, ary mba tsy hahafaty azy, fa hahavelona azy. Dia miala nenina aminy izy ka tsy tehanatsoaka ny fanekena nataony taminy na koa ny faminframpo nomeny azy. Fa efa … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Trinite 01-06 Jolay 2019 “Andriamanitra manasa ny olona”
Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra manasa ny olona” dia maneho indrindra ny fitiavany azy tsy ho irery na ho very (Lio.19:10). Ny foto-kevitra iorenan’ny fiantsoany dia ”Izy ho eo amin’ny olona, ary ny olona hitoetra eo Aminy”, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”izay itoerako no hitoeranareo koa” Jao.14:3b. Koa dia miantso sy mitaona ary mitarika … [Read more…]
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Trinite 24-29 Jona 2019 “Andriamanitra mamaly”
25 juin 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra mamaly, satria Azy ny famaliana. Hoy ny teniny: ”Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah – Deo.32:35” Rom.12:19b. Izy tokoa no mamaly, satria Mpitsara Marina Izy, ary mamaly na ny soa na ny ratsy mety ataon’ny olona. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita eo imasony ny ataontsika sy ny fiainantsika … [Read more…]
Alahadin’ny Trinite 17-22 Jona 2019 “Ny fiainam-baovao”
17 juin 2019 by mpiandraikitra	Leave a Comment
Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Trinite 17-22 Jona 2019 “Ny fiainam-baovao” * Fitarihan-kevitra: Alahadin’ny Trinite, feno ny fanehoana an’Andriamanitra, dia ny Ray, sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina. Fa Andriamanitra fitiavana no anton’ny zavatra rehetra (Jak.1:17), Jesosy Kristy Teny tonga nofo (Jao.1:14) no nomena ho fanavatona antsika (Efes.1:7), ary ny Fanahy Masina … [Read more…]
« Précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 20 21 22 23 24 Suivant »